China Cool-Touch Stainless Steel Electric Kettle Manufacturing sy Factory | Kennedy
Kettle Electric Stainless Steel Cool-Touch
KETTLE MAHERY SY ELEGANT - Ny kettle dia mitondra fampiononana sy famolavolana ny lakoziao. Miaraka amin'ny kettle stainless vy mahery dia azonao atao ny manomana dite, kafe, lasopy ary maro hafa. Tena azo antoka indrindra noho ny hafanana-insulating malefaka sy ny trano anatiny vita amin'ny sakafo-azo antoka stainless vy. Ny famolavolana maoderina ny fandrahoan-drano amin'ny loko 3 samihafa, na mainty, fotsy na volondavenona, dia mifanaraka amin'ny lakozia sy ny efitrano rehetra.
FAHAIZANA BE SY FAHAZAVAHANA- Noho ny endrika mirindra sy kanto dia toa kely ny kettle. Saingy ny soatoavina anatiny dia tena mahavariana kokoa: Miaraka amin'ny tanjaka 1L-2.2L litatra, ny kettle dia mahandro rano ampy ao anatin'ny fotoana fohy, na dia amin'ny fihodinana lehibe aza.
FIRAISANA RINDRA ROA, FOTOANA AO AINA TSY INTSONY, TSY MISY BPA, mora diovina- Ny trano anatiny manontolo amin'ny fandrahoan-drano dia vita amin'ny vy tsy misy vy SUS-304 azo antoka ho an'ny sakafo - tsy misy BPA sy zavatra manimba hafa. Ny famolavolana rindrina avo roa heny sy ny coating malefaka manokana dia mitazona tsara ny trano fonenana ary mafana mandritra ny fotoana maharitra ny rano. Koa satria ireo singa fanafanana ao amin'ny kettle dia rakotra ny palitao vy tsy misy pentina, ny kettle dia tena mora diovina.
Indrindra fa azo antoka noho ny hafanana-insulating malefaka sy ny fiarovana fiarovana.- Ao anatin'ny kettle dia tsy misy plastika, any ivelany dia misy faritra malefaka sy malefaka azo antoka - noho izany dia mafana amin'ny tanana ny kettle dite mandritra ny fandidiana ary miantoka ny fiasana azo antoka. Noho ny fiarovana amin'ny maina dia maty ho azy ny kettle raha kely loatra na tsy misy rano feno.
FAMPIANARANA bebe kokoa miaraka amin'ny fanokafana ONETOUCH, TOMBON'NY LEVEL ARY STRIP LED ELEGANT- Tsy mora ny famenoana ny kettle mini: misokatra malalaka ny sarony ary misokatra amin'ny alalan'ny bokotra tokana eo an-tampony - mamela mora ny famenoana amin'ny tsindry tokana. Ny mari-pamantarana ambaratonga anatiny dia miantoka ny fahamendrehana. Ny tady LED kanto eo ambany fifehezana dia mampiseho anao ny toetry ny fiasan'ny kettle amin'ny fotoana rehetra.
1.0L Stainless vy rindrina roa elektrika kettle
Fahaiza-manao ambony indrindra: 1.0L
Hery nomena: 1000W
304 food grade stainless vy
Rindrina roa anti-scald, vy ao anatiny ary plastika ivelany
Fanaraha-maso ny mari-pana tsy tantera-drano
Vary fiarovana maina
Miaraka amin'ny jiro famantarana
Vola miditra: AC 220-240V 50/60Hz
Fonosana: 1 pcs/box, 12 pcs/carton
Haben'ny baoritra: 57x40.5x42cm
Stainless vy rindrina avo roa heny hafanana tsy tapaka miasa kettle herinaratra
Fahafahana ambony indrindra: 1.7L
Hery nomena: 1800W
Fampiasana hafanana tsy tapaka
Vola miditra: AC 220-240V 50/60H
Haben'ny baoritra: 57x41.5x51 cm
1.7L Stainless vy rindrina roa elektrika kettle
1.5L Stainless vy rindrina roa elektrika kettle
Fahafahana ambony indrindra: 1.5L
Haben'ny baoritra: 57x41.5x47.2 cm
Kettle elektrika plastika 1.8L
Fahafahana ambony indrindra: 1.8L
Hery nomena: 1500W
Body kettle plastika vita amin'ny sakafo
Famantarana ny haavon'ny rano hita maso
Haben'ny baoritra: 48x44.7x52 cm
Kettle elektrika 1.0L stainless vy
Haben'ny baoritra: 51.2x32.7x46 cm
Kettle elektrika 2.0L stainless vy
Fahafahana ambony indrindra: 2.0L
Haben'ny baoritra: 66.5x44.5x57.5cm
Kettle elektrika 2.3L stainless vy
Fahafahana ambony indrindra: 2.3L
Haben'ny baoritra: 68x42x50cm
teo aloha: Mini fan miaraka amin'ny bateria avy any Kennedy
Manaraka: Fanilon'ny camping azo averina amin'ny vonjy taitra